युगसम्बाद साप्ताहिक - मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि�
Monday, 12.09.2019, 10:57am (GMT+5.5) Home Contact
मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि�
Monday, 01.21.2013, 04:12pm (GMT+5.5)
० मुलुका दण्डहीनता बढिरहेका बेला तपाईं मुलुकभरका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाला बार एसोसिएशनको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । कानुनी राज र विधिको शासनका सवालमा आगामी दिनका चुनौतिहरू कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो मुलुकमा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । संविधान विहीताको स्थितिबाट मुलुक गुज्रिरेको छ र लिगभन्दा बाहिर गैरहेको संविधानवादका मूलभूत सिद्धान्तको परिपालनाका साथ अगाडि बढ्ने संस्कृति हराउँदै गएको अवस्था छ । यी सबै कुराहरूलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने चुनौतिपूर्ण अवस्था मुलुकका सामु छ ।
मुलुकका सामु जुन प्रकारका चुनौतिहरू देखा परेका छन् त्यसलाई हल गर्न नेपाल बार एसोसिएशन जहिले पनि अग्रसर भैरहेको छ । विधिको शासन, कानुनी राज र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हिंडेको मुलुकभरकै कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशन जहिले पनि कानुन अनुरुप नै शासन संचालित हुनुपर्छ र विधिको उच्च सम्मान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने संस्था भएकाले बारले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गराउनका लागि नेपाल बार एसोसिएशन सर्वदा क्रियाशील रहनेछ । हामीले कार्यभार सम्हालिसकेपछि त्यसका लागि तत्काल पहल गर्नेछौं ।
० पछिल्लो समय कानुनलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने र आफूखुसी प्रयोग गर्ने गलत संस्कारको विकास भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त मुलुकमा संविधान बन्ने टुंगो नै छैन । यो स्थितिमा नेपाल बार एसेसिएशनको भूमिका कस्तो रहला ?
नेपाल बार एसोसिएशनले विभाजित भएर होइन एकताबद्ध भएर, साझा दृष्टिकोण निर्माण गरेर मुलुकको यथार्थतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । मुलुक अत्यन्त जटिल मोडमा उभिएको छ । यो बेलामा संविधानको सर्वसम्मत व्याख्या, त्यो नभए संविधानवादका सिद्धान्तलाई अधिकतम पालना गरेर, अंगिकार गरेर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । संविधानको सर्वसम्मत व्याख्या के हुन सक्छ भन्ने कुरा र संविधानलाई पालना गर्ने सवालमा विकसित भएका असल अभ्यासका परम्परालाई हेरेर हामीबाट संविधानविज्ञहरूलाई समेत बहसमा ल्याएर मुलुकलाई निकास दिने प्रयास हुनेछ । अहिले संविधान जुन ठाउँमा गएर फसिरहेको छ त्यसलाई त्यहाँबाट निकाल्नका लागि कस्ता खालका बाटाहरू निर्माण गर्न सक्छौं र कस्तो उपाय सबै राजनीतिक दलहरूलाई पनि मान्य हुन्छ भन्ने किसिमले साझा धारणा तय गरिनेछ ।
० यसका लागि कानुन व्यवसायी मात्र अगाडि सरेर हुन्छ त ?
मुलुकको निकासका लागि नेपाल बार एसोसिएशनले तय गरेको धारणालाई नागरिक समाजसंग पनि छलफल गरी एउटा सर्वसम्मत दृष्टिकोण निकालेर मुलुकलाई अगाडि बढाउने सबैको कार्यभार हो । त्यो कार्यभार सबै मिलेर पूरा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ नेपाल बार एसेसिएशन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । हामीले कार्यभार सम्हालेपछि त्यस दिशातिर गहनतापूर्वक छलफल गरेर अगाडि बढिनेछ ।
० अहिले मुलुकमा विधिविहीनताको स्थिति छ । नेपाल बार एसेसिएशन विधिको शासना विश्वास गर्ने संस्था भएकाले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मैले अघि नै भनिहालें कि विधिको शासनको सर्वोच्च अवस्था भनेको संविधानको सक्रियता हो । मुलुकमा अहिले संविधान नै क्रियाशील नहुने अवस्थामा पुगेको छ । संविधान क्रियाशील भैसकेपछि संविधान अनुरुप बनेका कानुनहरूलाई तदनुरुप व्यवहार र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यस कारण पहिलो कुरा संविधानका निस्क्रिय रहेका धाराहरूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । अहिले मुलुकका सबै संवैधानिक अंगहरू रिक्ततातर्फ गैरहेको, सर्वोच्च अदालतमा समेत न्यून संख्यामा न्यायाधीशहरू रहेको जुन अवस्था छ यसले कानुनको शासनलाई प्रबद्र्धन गर्न अत्यन्त कठिनाई उत्पन्न भएको स्थिति हो । यस्तो स्थितिमा सबभन्दा पहिले संविधान क्रियाशील गराउन लागिपर्नु छ । त्यसपछि सक्रिय भएका संविधानका धारा अन्तर्गतका कानुनहरूको कार्यान्वयनको दिशातिर बार एसोसिएशनले ठोस पहल गर्ने छ र ‘वाच डग’को भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
० मुलुकमा चारैतिर विभाजनको रेखा कोरिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएशनका चुनौतिहरू के के देख्नुभएको छ ?
अहिले बारको सबभन्दा ठूलो चुनौति भनेको कानुनविद्हरूमा एकमत नहुनु हो । संविधानको व्याख्याका सवाला कानुनविद्हरूबीच मतभेद छ । संविधानका सबै धाराहरूको अलग र छुट्टाछटै व्याख्या हुने गरेको छ । हुन त संसारभर नै अलग अलग किसिमका व्याख्या हुने गर्दछन् तर यसो भनेर आफूखुसी र आआफ्नो पाराले व्याख्या गर्ने भन्दा पनि एउटा साझा रुपमा व्याख्या गरेर अगाडि बढाउने हिसाबले जाउँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो । समस्यालाई जटिल बनाउने हैन कि हल गर्नका लागि संविधानको कुन चाहिं व्याख्या धेरैका लागि स्वीकार्य हुनसक्छ र संविधानवादको सिद्धान्तलाई पनि असर गर्दैन भन्नेतिर ध्यान दिनु पर्दछ । त्यस्तो व्याख्याले हाम्रा भावनालाई पनि असर नगरोस् । अहिले संविधानको एउटा धारालाई मात्र समातेर त्यसको मात्र व्याख्या गरेर समाधान निस्कदैन । हाम्रो संविधानको एउटा भावना र मर्म छ । त्यो भावना र मर्ममा टेकेर अधिकतम्लाई स्वीकार हुनसक्ने र राजनीतिक दलहरूलाई पनि त्यसमा सहमत गराउनु नै अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौति हो । हामीले त्यो चुनौतिको सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र सबैलाई स्वीकार्य एउटा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसका अतिरिक्त बारका गतिविधिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्दै लिएर जाने र पेशागत हकहितलाई संरक्षण गरेर अगाडि जाने भन्ने चुनौतिहरू त छँदैछन् ।
राजनीति कम, पेशागत काम बढी गर्नुपर्छ - नव निर्वाचित महासचिव सुनिल कुमार पोखरेल
० मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा अत्यन्त संक्रमित भएको अवस्थामा तपाईं नेपाल बार एसोसिएशनको महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको छ । मुलुकको निकासका लागि बारले खेल्ने भूमिका कस्तो हुनसक्छ ?
बारको जहिलेसुकैको भूमिका भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनको शासनलाई संस्कृतिकरण गर्ने हो, त्यसको ‘फाउण्डेशन’लाई बलियो पार्नु नै बारको भूमिका हो । यहाँले भने जस्तै अहिलेको अवस्था अत्यन्त डरलाग्दो छ । जसले कानुन पालना गर्ने हो उसैले कानुन उल्लंघन गरिराखेको छ र कानुनी शासनमा एक किसिमको चेतावनी आएको छ । हामी यसबिरुद्ध देशव्यापी रुपमा जनमत सिर्जना गर्ने अभियानमा लाग्नेछौं । दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी शासनको खिल्ली उडाउने जुन काम भएको छ यसका बिरुद्ध सशक्त कार्यक्रम अगाडि ल्याउने छौं ।
० कानुनको अपव्याख्या गर्दै आफूखुसी निर्णय गर्ने अपसंस्कृतिको विकास भैरहेको छ । यस्तोमा नेपाल बार एसोसिएशन एक ढिक्का भएर विधिको शासन स्थापित गर्ने काममा लागिपर्न सक्छ ?
यसमा कुनै द्विविधै छैन । कानुन व्यवसायीहरूको मूल मन्त्र नै स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासन हो । अहिलेको समस्या भनेको कानुनको आफूखुसी व्याख्या र प्रयोग गर्ने हो । लिखित कानुनको आफनो भाषा हुन्छ र सोही अनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले आफू अनुकूलको व्याख्या गर्ने जुन खालको अवस्था छ यसबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ र बारका तर्फबाट हामी पहल गर्नेछौं ।
० व्यापक रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ भनिन्छ । तपाईंहरूले त्यसलाई चिर्न सक्नुहुन्छ त ?
अहिले नेपाल बारको चुनौति राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो । व्यक्तिका आआफ्ना सिद्धान्त भए पनि बारमा हामीले राजनीति थोरै र व्यावसायिक काम धेरै गर्छौं । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राजको मूल्य मान्यतामा हामी कहिल्यै कुनै सम्झौता गर्दैनौं । अहिलेको अवस्थाको अन्त्यका लागि नेपाल बारका पदाधिकारीले राजनीति कम र व्यावसायिकतालाई प्राथमिकता दिएर गइयो भने मुलुकलाई अहिलेको अव्यवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन सकिन्छ । यसो गर्न सकियो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र मानव अधिकार संरक्षणको सही अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
नेपाल बारले मुलुकमा विधिको शासनको स्थापित मान्यतामा आँच आएका बेला यसको स्थापनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको विगतको दृष्टान्त छ । यस्तो अवस्थामा नवनिर्वाचित नेतृत्वका सामू त्यस दिशामा अग्रसर हुन र मुलुकलाई सही बाटोमा डोर्याउनु ठूलो चुनौतिको विषय छ । अहिलेको संवैधानिक संकटको निकासका लागि हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरेका छौं । हामीले राष्ट्रव्यापी रुपमा संवैधानिक भेलाको आयोजना गर्नेछौं । देशमा पाका र अनुभवी कानुन व्यवसायीदेखि लिएर युवा र ऊर्जावान कानुन व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूको धारणा लिनका लागि हामीले भेलाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका हौं । सो भेलामामा उपस्थित मेची–महाकालीका कानुन व्यवसायीहरूको धारणा बुझेर निकासका लागि एउटा अवधारणा तयार गरिने छ । त्यो अवधारणापत्रमा राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका सरोकारवालाहरूलाई सहमतिका लागि आव्हान गरिनेछ जसले अहिलेको संवैधानिक र राजनीतिक संकटलाई निकास दिनका लागि ठूलो भूमिका खेल्ने छ ।
अहिलेको मुख्य समस्या नै राजनीतिमा देखिएको केटाकेटी खलाइ हो - डा नारायण खड्का, नेपाली कांग्रेस (07.17.2012)
अहिले संविधान एक किसिमले निस्क्रिय प्रायः छ – प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा एमाले (07.10.2012)
२२ दलको शक्ति प्रदर्शन (06.11.2012)
जातीय आधारमा प्रान्त बनाउन हुँदैन – ताकाशी मियाहारा, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी (06.04.2012)
परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै छौं - दुर्गाप्रसाद अर्याल (05.24.2012)
राज्यको पुनःसंरचना : समस्या र सम्भावना - मोहनविक्रम सिंह (05.15.2012)